Beesha Caalamka oo war ka soo saartay colaada Gobolka Sool. – Hornafrik Media Network
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay colaada Gobolka Sool.
By HornAfrik	 On May 25, 2018
Hornafrik-Beesha caalamka iyo Dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujiyay xaaladaha dagaal ee ka aloosan degaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, iyagoo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo Gacan ka hadalka.
Ciidamada Amaanka Muqdisho oo gacanta ku dhigay In kabadan 60-mooto Bajaaj.
Al-shabaab oo doortay Hogaamiye Cusub! Waa Kuma?